Ndị na-eyi ọha egwu wakporo 24 Oktoberplein na Utrecht, ụjọ na mba nile! : Martin Vrijland
N'ụtụtụ a, a ga-enwe ndị na-eyi ọha egwu na Utrecht. Anyị amaghị ihe ọ bụla, ma ọ bụghị na anyị na-agụ, nụ ma hụ akụkọ mkpesa na mgbasa ozi. A gaara enwe égbè na tram na ya 24 Oktoberplein. Enweela mwakpo na Trumanlaan na Utrecht. O yiri ka ọ bụ 1 na-arụ ọrụ. Otú ọ dị, e nwekwara akụkọ banyere ndị na-eme ihe n '4. Ndị uwe ojii nọ na-achọ Renault Clio. Ndị uweojii anaghị achọ ikwu ihe ọ bụla banyere ndị a na-ata ahụhụ, mana ndị a ga-eburu gaa n'ụlọ ọgwụ mberede. Ya mere, akụkọ ahụ na-etowanye ma nwekwuo mgbagwoju anya. Ọ na-ada ụda dị njọ ma dị njọ, ma nke ahụ bụ ma eleghị anya atụmatụ.
Ọ bụ akụkọ na-akpali akpali mega ma ọ dịkarịa ala, anyị na-eche na ụjọ ka dị, nakwa na ọ nwere ike ịpụta oge ọ bụla na ebe ọ bụla. Anyị anaghị etinye aka na akaụntụ greenscreen ma ghara iburu n'uche na ndụ na-eme ihe, dịka anyị na-egosi mgbe niile na saịtị a, dị ka Pegida-ngosi nke Antifa ma ọ bụ na Zaanse vloggersrel (kpam kpam). N'ọnọdụ ọ bụla, mgbasa ozi na-akpata oké ụjọ ma na-akpọ ndị mmadụ ka ha bulite ihe ọ bụla na ebe nrụọrụ weebụ ndị uweojii. Nke a na-eme ka o doo anya na ị ga-adabere na ya. Ọ dịghị onye ga-eche ma ihe osise ndị a na-ekpo ọkụ na a PsyOp (arụmụka uche) nwere ike ịbụ ma ọ bụ ma eleghị anya na-etinye ọnụ site na ngwanrọ.
Na mba na-eji ihe nkiri egwu egwu Inoffizieller Mitarbeiter ị nwere ike itinye ọnọdụ dị otú ahụ n'ụzọ dị mfe, ma ọ bụrụ na ị na-ebuso otu ebe ebe ọtụtụ mmadụ na-adịghị abịa. Nke ahụ bụ okwu nke ịhapụ ebe ahụ na ikwe ka otu ndị na-eme ihe nkiri rụọ ọrụ ha. Enwere m nnukwu obi abụọ na ọnọdụ ndị dị otú a, n'ihi na ọ bụkarị 'Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta'nwere oke mmetụta. Jide n'aka na e nwere nsogbu ọnọdụ, na-ebute mmeghachi omume site na mgbasa ozi (nke ndị mmadụ na-emekarị na mmetụta uche) wee gwazie gị ihe ngwọta nke na-ewebata 'ndị uweojii' na jaket enyi. '
Anyị na-aga ịhụ ihe oyiyi na anyị ga-enweta otu manhunt. Ikekwe nke a bụ mmalite nke mgbochi Turkey na oke egwu nke m mara ọkwa (lee isiokwu a). Ka ọ dịgodị, e kwuru banyere otu onye 37-ochie Turkish onye aha ya bụ Gökman Tanis. Ànyị ga-ahụ njikọ njikọ FETO nke m kpọtụrụ aha na isiokwu ahụ (gbasara njikọ ahụ na New Zealand)? FETO bụ ìgwè ndị ụjọ Fethullah Gülen, dị ka Turkey si kọwaa ya.
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị bi na agaghị enwe ike ikwere ma ọ bụ ghọta na gọọmenti, na imekọ ihe na ụdị ụlọ ọrụ ọ bụla (gụnyere ndị uweojii na ndị mgbasa ozi, ihe omumu ihe nkiri na Inofizieller Mitarbeiter, wdg) ga-enwe ike ịtọ egwu dị otú ahụ. Nke ahụ bụ n'ihi na ndị mmadụ ka kweere na Trumanshow nke mgbasa ozi (Trumanlaan na Utrecht dị nnọọ mma na ọnọdụ ahụ). Ọ bụ mmadụ ole na ole amawo ọnọdụ ndị e setịpụrụ na ọnọdụ ahụ ma gosipụta ya na saịtị a. Ndi mmadu enweghi ike ikwenye na gọọmentị, ụmụ amaala na mgbasa ozi nwere ike ịghọgbu ihe iji gbanwere ọrụ, akpa ego na n'okpuru onye nlekọta nke ịchọta 'mgbaru ọsọ ka elu'. Ndị agha na-ahụ maka mgbasa ozi mgbasa ozi nke dị njikere ịwakpo onye ọ bụla nke kwụsịrị ịjụ ajụjụ ahụ, na-eme ka nrụgide ahụ chọrọ.
Olee ihe ndi nwanyi na umuaka nwere? Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịmepụta ndị na-abụghị ndị mmadụ site na ịcha site na ngwanrọ AI.
Ị nwere ike ịme vidiyo dị omimi.
Ị nwere ike iji usoro greenscreen
Ị nwere ike ịkpọ ndị ọrụ na ndị òtù dịka ndị uweojii, ụlọ ọgwụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ka ị mebie ndị mmadụ na-arụ ọrụ. Ònye na-eme ihe dị otú a? Ị maara mmadụ ole na ole nọ n'ebe ndị agbata obi anyị nọ n'ebe ọwụwa anyanwụ na-arụ ọrụ dị iche iche maka okwu nduhie na iri afọ ole na ole gara aga? Ọ bụrụhaala na ndị mmadụ kwụrụ ụgwọ ma nwee ike ịbawanye elu, ọtụtụ ndị na-ekwe ka uwe ogologo ọkpa ahụ na-azụ ahịa ma na-emechi ọnụ ha n'èzí. Ọ bụrụ na i kwetaghị nke ahụ, ị ​​gụbeghị akụkọ ihe mere eme n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Eleghi anya ị ga-eji ihe ngosi mgbasa ozi gosi egwu na ya, nke mere na ndị uweojii nwere ike ịme onwe ya ọzọ.
Ihe dị ịrịba ama site na "onye akaebe hụrụ". de Telegraaf na aha Koster kwuru ihe na-egbu egbu:
De Koster: "M si ọrụ m bịa mgbe ọ mere. M na-eguzo na ọkụ okporo ụzọ na 24 Oktoberplein ma hụ otu nwanyị dinara, Echere m na ọ nọ n'etiti 20 na 35 afọ. N'oge ahụ, m nụrụ pang pang pang ugboro atọ. Ndị ikom anọ jere ije ngwa ngwa n'ebe ọ nọ, ha gbalịrị ịdọpụ ya ma mesịa nụ ka pang pang pang ọzọ, ndị ikom ahụ wee hapụ nwanyị ahụ ọzọ. Nnukwu ọgba aghara n'ebe ahụ. "
Ya mere, nwanyị ahụ anọworị ebe ahụ mgbe égbè ahụ mere? Iju. Ị maara ihe. Ọ bụ akụkọ ọzọ na anyị ga-anụ akụkọ ndị ọzọ. Trumanshow ga-aga n'iru:
(Ị gụkwara ya ihe aga agabanyere agha a na New Zealand maka ịmatakwu ọhụụ nke egwu egwu ugbu a)
Ihe ndekọ njikọ njikọ: telegraaf.nl, indebuurt.nl
Tags: 24, 37, agha, onye ndu, agba, Fethullah, FETO, nụrụ, ndị akaebe, Gokman Tanis, Gülen, afọ, nwoke, October square, gbaa, egwu, ndị na-eyi ọha egwu, iyi ọha egwu, tram, Trumanlaan, Turkish, Utrecht
Ana m eteta dere, sị:
Amaara m na ị nwere mmasị na nkà mmụta ihe ọmụmụ.
Harry S. Truman bụ onye isi mba Amerika nke jere ozi dịka onyeisi oche nke 33rd nke United States,
N'uzo 33e, o yiri ka Ides nke March abanyela na ike zuru oke. Ka anyi lee ma anyi nwere ike icho anya na 22e ruru oke.
"N'ụzọ ọ bụla, gịnị mere e ji akpọ square aha mgbe ụbọchị 24 gasịrị? Ihe pụrụ iche ọ ga-eme n'ụbọchị ahụ? Ee! Na October 24 1945, taa kpọmkwem 73 afọ gara aga, e hiwere United Nations. Ugbua n'oge agha agha ka e guzobere maka otu mba zuru ụwa ọnụ nke na-agbaso udo, nchekwa na imekọ ihe ọnụ n'etiti mba. Naanị mgbe Agha Ụwa nke Abụọ gasịrị, na 24 October 1945, oge eruola: United Nations bụ eziokwu. "
Ma n'ezie, ndị uweojii na-akpọ ka a ghara itinye ihe oyiyi ọ bụla na mgbasa ozi mgbasa ozi: a na-etinyeworị onye na-achọ ịchọta ihe ọ bụla.
Ọfọn ndị na-eme ihe nkiri na-etinye n'ọnọdụ, ma ọ bụ ntakịrị ụjọ na ndị mmadụ na-amalite na-emerụ site na
Ihe m ka na-eche bụ otú ọ ga-esi kwe omume na ndị ọrụ igwefụ ahụ niile nwere ike ịnọ na ụlọ ọ bụla? Ndi nyocha ndị uweojii na-emeghe kpam kpam n'oge mgbasa ozi egwu ka ndị na-eyi ọha egwu nwekwara ike ige ntị nke ọma? Ma ọ bụ ụmụ nwanyị na ndị ụkọja na-enweta ọnụ? "Bịanụ n'agbata huppelepup, n'ihi na anyị ga-eme mwakpo ọzọ"
Ihe niile na-egosi na ọ bụ PsyOp.
Calvin dere, sị:
Ị ka na-ahụ njikọ dị na mma agha taa? Ị chere na ọ bụ ihe mgbagwoju anya na akụkọ ahụ na-agbacha agbacha ... ma ọ bụ ka ha jiri aka ahụ mee ihe a?
Ogbugbu a mere na Amsterdam nwere ihe ọ bụla merenụ na-achọpụta na trams dị na Utrecht dị ntakịrị karịa na mbụ
Ugbu a, m na-ahụ na ọ bụ ụda mba, ya mere na Utrecht.
Nke a enweghị ike ịme ka o doo anya na ọtụtụ ndị njem na-achọ njem dịgasị iche ma ọ bụ na ha wepụrụ otu ụbọchị. A mara ọkwa mgbe niile.
Ihe mgbaàmà ọzọ anyị nwere ike na-eme na PsyOp nke ọma.
kpọmkwem, ọ pụghị ịbụ ihe dabara adaba na nnukwu agha a mere kpọmkwem n'ụbọchị nke a "tereur" omume.
Isi ụlọ ọrụ (NS) dị na Utrecht, na abalị a, anyị ga-ahụ onye ọrụ a nke Mahadum Utrecht ọtụtụ
Chris34 dere, sị:
Akụkọ ndị na-ezighị ezi na-ezighi ezi, ọtụtụ ndị na-ekwu na ha anụwo mkpuchi, gụnyere ndị ọkwọ ụgbọala.
Mgbe ahụ, 'omee' a na-ahụ na RTL. Ihe nkiri na-ada ụda dull, de Utrechter na-ekwu. "Echere m na e nwere mgbochi na ya. Kama ụda ụda olu, anụrụ m ụda afụ ụfụ. "Dị ka Daan si kwuo, ọ dị ka onye maara ihe banyere nwanyị ahụ.
Ọ dị mma na ọtụtụ motorists na okporo ụzọ square na nnọọ a otutu mkpọtụ na ụgbọala ha na-anụ onye na-agbapụ na a silencer ... ..
"Obodo Utrecht gwara ndị mmadụ ka ha nọrọ n'ụlọ. Van Zanen: "Anyị mere nke ahụ n'ihi na anyị chere na a ga - enwe ihe ịgba égbè n'ọtụtụ ebe. Nke ahụ abụghị ụdị ahụ, dịka anyị maara ugbu a. Otu onye na-enyo enyo dị na foto a, a na-achọ ha, ọ kabeghị n'ime. E nwekwara ọtụtụ ndị a na-enyo enyo, anyị amaghị nke a. "
Echere m na ụlọ ọrụ ndị ahụ jupụtara na igwefoto n'ihi ya, nsogbu a dị mgbagwoju anya bụ ihe ọzọ na-egosi na PsyOp.
Martin ka ị maara banyere nke a?
Melite 16.24: Dịka ndị akaebe si kwuo, onye na-agba ụta a na-akpọ 'Allahu Akbar' tupu ya emepe ọkụ na tram. A na-ahapụ onye njem na-akpọ Moroccan, dị ka Het Parool si kwuo. Anyị na-achọ ịmata onye n'ime usoro iwu ahụ bụ nke mbụ iji mesie ya ike na ọ dịghị ihe jikọrọ ya na Islam.
Dị na xandernieuws
Lee njikọ gị mgbe ị kwụsịrị okwu. Akụkọ doro anya. Ndịàmà na-ekwu banyere ndị na-eme ihe n'egbughị oge na 4 na-ebu agha na egbe egbe ... .. Ma ha nwere nchegbu 1
Biko nyere m aka ka m ghara ịghọta. Kedu ihe na-egosi na ihe gaara eme nwere njikọ 'iyi ọha egwu'? Gịnị ma ọ bụghị n'eme mpụ ma ọ bụ nsogbu gbasara obi ụtọ?
Ndi kpukpru nnyịn inyeneke ikaba aban̄a mme ibuotikọ emi?
Aghọtara m na a na-ahụ onye na-eme ihe maka nkwenye ndị a na-asọpụrụ. "Ndị na-achụ ntaramahụhụ" na-apụ iji jide ọdụm ma chọta òké. Egwu egwu na Holland. Dee ederede ma ree ya na Hollywood. Kedu mba.
Egwu egwu na Hollandia.
Anọ m na-arịa ọrịa niile, ọ bụ eziokwu.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbatị ihe dị otú ahụ, mee ya nke ọma mgbe ahụ ghara ime ka ọ bụrụ ihe dị egwu na-egosi na ọ bụ ihe nkiri.
Ụdị ahụ nwere ike ijide ha. Lee ihe ọjọọ
Dịka omee ahụ na Newzealand ... ebee ka oghere ndị ahụ dị na mgbidi, ebe ọbara dị n'elu mgbidi ....
Ndị nwụrụ anwụ adịworị n'ala tupu nwoke ahụ abata na Wolfenstein 3D.. ma ugbu a, a na-ewepụ ihe oyiyi niile na ịntanetị
Atụrụ na-enwe oké ụjọ n'ihu ntuli aka na n'ezie mkpa ezigbo onye ọzụzụ atụrụ. Obodo-achịkwa FvD nnukwu mmeri?
"Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị niile, ma e wezụga ndị Forum maka Democracy, kwụsịtụ nhoputa ndi nhoputa ndi ochichi na ndi isi ochichi ndi ochichi na ndi agha."
Na mberede, enwere m mmetụta. Cheta ajụjụ nke onye nlekọta Turkish ahụ nke na-abanye na Netherlands. Riots, wdg. Rutte meriri ntuli aka. O mere "ndị ikpe" megide ndị Turks. Otu ụzọ Rutte na Erdogan n'oge ahụ?
Ezigbo 😀 a Psyop nwere ọtụtụ echiche na nke ahụ bụ otu n'ime ha ..
Anyị nwere ya!
Ya mere, onye a na-enyo enyo na onye omekome PsyOp jidere ya. Ọ dị mma na anyị ka nwere nnukwu ndị uwe ojii. Kedu ihe ha mere nke ọma, "ndị ọrụ"; "Ụmụ anyị nwoke". Ụjọ na-amị mkpụrụ!
.. Nzọụkwụ ọzọ bụ n'ezie usoro iheomume, n'ezie anyị apụghị ikwe ka nke a na-aga ... .. Rutte na-akwalite na Politburo na Brussels iji mee ka onye ibe ya bụ Timmermans ụlọ ọrụ. A na-eme atụmatụ ndị uweojii na EU site na nkwado na Frontex, EUROGendfor arụnyere na voila na ndị uwe ojii State 2.0 na-arụ ọrụ dị ka uwe, n'ihi na ọ ga-eme ọzọ ka anyị ghara ichefu ...
Nabata na oke ọhịa, ọgba aghara na-abịa njem. United States na-etinye bọmbụ nuklia na Europe n'izu a, esemokwu na Turkey nwere ike ịmaliteghachi n'oge okpomọkụ a, ndị America ahapụlarị Nkwekọrịta INF ma na-emepụta agha ụgbọ mmiri a na-ejidebeghị, ọgba aghara dị elu n'oge na-adịghị anya ka ndị agha EU, ndị dike ndị a nwere ike ịgbanwuo ọsọ ọsọ jigide akpa.
Site n'ụzọ, ị hụla ihe e dere na égbè nke New Zealand agha? Ihe omumu ihe omumu maka otutu afo na Europe na ala eze Ottoman
Breivik Tarrant Copy Cat na-azụ site na mbụ na-enyo enyo ndị ji Breivik dị ka a bara uru nzuzu. Ụzọ niile na-eduga na ndị a na-enyo enyo ma e wezụga na Utrecht karịa ebe a chọtara akwa akwa.
France 2019, New World Order agenda
Ntucha bu / bu igodo ha ike ya mere ihe nile nwere ike ime ka anyi kwenye, anyi agagh enwe ike inwe ụdị ihe a na-adi na Charlie Hebdoo, n'ezie, ebo ndi huru dum Charlie Hebdoo shootings kpughere, ebe a na ebe a. atụle ọtụtụ ihe.
Nils dere, sị:
Foto gị bụ John Maes, Telegraaf. A na - edezi akwụkwọ Wikipedia maka ọgụ a, n'ezie, n'ime otu ụbọchị, n'otu foto ahụ. Wiki anaghị ezipụ foto ndị nweghi ikike nwewere onwe ha. Na nkenke, anyị na-ahụ ọzọ ịchọta ọrụ nzuzo na mgbasa ozi na akwụkwọ nkà mmụta mgbasa ozi maka ụra Netherlands. Ya mere, 100% na-agbanyeghị ọkọlọtọ.
johan hague dere, sị:
Ọ bụ ihe ijuanya na onye a ga-ejide na onye omempụ nke agbụrụ kasị ọcha nwere ike ichere ikpe ahụ n'ụlọ.
Enwere m echiche Folkert de G.
Achọpụtara m ndị nwụrụ anwụ ka njọ, onye nke ọ bụla n'ime ha ga - ebi na nke a.
Achọrọ m ịmata ihe iwu ọhụrụ ga-esi na nke a pụta.
Iwu ọhụrụ ga - ejedebe nwa amaala ma ọ bụghị ikpebi ndị omempụ, n'ihi na anyị ga-enwe ike iji ya.
Anyị ga-enwe ike ikwu na iwu ahụ ziri ezi.
Ọchịchị dị njọ ma ikpe ziri ezi ka njọ!
" Nchikota New Zealand: nchikota nke ndi mmadu na ndi mmadu ndi mmadu na ndi mmadu
Gọkmen Tanis, onye a na-enyo enyo, jidere, ma eleghị anya ihe nkiri ezinụlọ »
Nleta nile: 11.713.703